Daty famotsorana an'i Angela Black Season 2: Fanavaozana, Cast, Plot & Spoilers! - Fialam-Boly
Daty famotsorana an'i Angela Black Season 2: Fanavaozana, Cast, Plot & Spoilers!
Hisy ve ny vanim-potoana faharoa an'i Angela Black? Tsidiho ity pejy ity raha te hahalala bebe kokoa!
Vanim-potoana 2 an'i Angela Black: Mendrika ve ny mijery hatrany?
Daty voalohany amin'ny vanim-potoana faharoa an'i Angela Black
Nambara ny mpikambana ao amin'ny Angela Black Season 2
Angela Black Season 2 dia manana Plot, fa inona izany?
Tamin'ny vanim-potoana 1, inona no nanjo an'i Angela Black?
Rahoviana no hisy ny vanim-potoana faharoa an'i Angela Black?
InAngela Black, i Harry sy i Jack Williams dia mitantara ny tranon'ny vehivavy iray izay i Olivier vadiny dia mpivaro-tena. Raha ny momba ny fikarakarana ny fianakaviany dia mihoatra lavitra noho ny antson'ny adidy i Olivier. Raha vao nivoaka ny fiara izy dia nisy lehilahy iray milaza ho mahalala ny momba ny vadiny.
Ny fampisehoana mahatalanjona nataon'i Joanne Froggatt amin'ny ampahany manan-danja dia mamelona ny tantara. Nandray tsara ny seho ny mpijery, ary miandry fatratra ny vanim-potoana ho avy. Ny zavatra fantatray hatreto dia tokony hahaliana anao amin'ny mety hisian'ny vanim-potoana faharoa!
Noforonin'i Harry sy Jack Williams, ny andian-tantara mampientam-po Angela Black dia mifototra amin'ny vehivavy iray izay matetika ampijalian'ny vadiny Olivier maharikoriko. Lehilahy miasa mafy mamelona ny ankohonany, Olivier koa dia manana tantaran'ny herisetra. Nisy lehilahy iray avy eo nanatona ilay mpilalao sarimihetsika, nilaza fa mahalala ny zava-drehetra momba ny vadiny. Ny filalaovana sarimihetsika miavaka nataon'i Joanne Froggatt dia mamelona ilay tetika sarotra. Vokatr'izany, ny mpankafy dia miboiboika momba ny halehiben'ny andrasan'izy ireo amin'ny vanim-potoana manaraka. Mety hisy vanim-potoana faharoa amin'ny asa, ka izao no fantatsika hatreto!
Hamaky bebe kokoa: Adachi to Shimamura Season 2: Daty Famotsorana, Tetikasa, Toetra | Info feno!
Amin'ny 7 febroary 2022, ny Spectrum dia handefa ny vanim-potoana voalohany an'i Angela Black. Fizarana 60 minitra enina no mandrafitra ny votoatin'ny vanim-potoana fanokafana. Amin'ny 10 Oktobra 2021, ny ITV any Royaume-Uni dia handefa ny voalohany amin'ny fandaharana, izay arahin'ny famoahana mivantana an-tserasera.
Ny zavatra rehetra fantatsika momba ny Season 2 hatreto dia tafiditra eto ambany. Tsy nisy fanavaozam-baovao avy amin'ny tambajotra an-tranony, ITV. Raha ny marina, fizarana enina monja ny fampisehoana, ka azo inoana fa ho hitantsika ny fiafaran'i Angela Black. Amin'ny fotoana farany amin'ny vanim-potoana iray farany, i Angela dia mianatra ny tena maha-izy azy sy ny fanirian'i Ed. Farany, hendry noho ny vadiny izy rehefa nigadra. Noho izany, ny fehin-kevitry ny andiany voalohany dia mendrika.
Araka ny voalazan'i Angela Joanne Frogart (Joanne Frogart), dia nisy fizarana enina hatrany ny andiany. Nandà an-kitsirano ity mpilalao sarimihetsika ity raha havaozina amin'ny vanim-potoana fahatelo na tsia ny fampisehoana. Taorian'izay dia nilaza izy fa ho miniseries. Fanampin'izay, nilazalaza an'i Angela Black ho toy ny mampientam-po ara-tsaina izy. Nisy fehin-kevitra nahafa-po ny rihana tamin’ny fizarana fahenina. Tsy ilaina ny famerenana satria ny mpijery dia hiaina andiana fahatairana, tsy ampoizina ary fikorontanana amin'ny famaranana.
Izay no tsy hankatoavan’ny tambajotra ny taom-pilalaovana manaraka, araka ny vinavinay. Satria ny andiany voafetra dia nohavaozina miaraka amin'ny fizarana fanampiny, tsy azonay antoka. Ilay Mpandainga koa dia nanasongadina an'i Froggatt ho Laura Nielson, ilay mpitsabo mpanampy niampanga an'i Dr. Andrew Earlham ho nanolana. Mbola misy ihany ireo tsy afa-po amin’ny seho na dia misy fiafarany amin’ny vanim-potoana voalohany aza. Vokatr'izany dia nomena famatsiam-bola amin'ny vanim-potoana faharoa izy io tamin'ny taona 2018.
Raha manao tsara i Angela Black ary mahasarika mpanaraka maro dia mety hiverina izy. Tsy misy antoka fa hanomboka ny famokarana ato anatin'ny volana vitsivitsy raha manaiky ny tambajotra. Noho izany, manantena izahay fa ny vanim-potoana faharoa an'i Angela Black dia hivoaka tsy ho ela. Amin'ny fotoana iray eo anelanelan'ny 2023 sy 2024.
Raha misy ny vanim-potoana faharoa dia mety hiverina i Joanne Froggatt. Ny fanararaotana nataon'ny vadiny dia loharanon'ny adin-tsaina tsy tapaka nandritra ny tapany voalohany tamin'ny vanim-potoana. Ny fiverenana ho an'i Michelle Hausman, izay mitendry an'i Olivier, vadin'i Angela, dia azo atao miavaka. Mpimonomonona misaron-tava ho Theo Walters, Ed Harrison, no nilalao an'i Samuel Adwinmi. Ashley McGuire (Judy) sy Pippa Nixon (PC Chappelhow) dia hiverina ary Clement Stokes (Sam Meyer), Seth Stokes (Max Meyer), ary Ashley Stokes (Sam). Andraso.
Ny vanim-potoana 1 dia mampiseho fianakaviana manankarena izay mankafy fiainana milamina. Ny mifanohitra amin’izany anefa no mitranga. Olivier, vadin'i Angela, dia zatra nanararaotra ny vadiny. Theo Walters, mpamono olona nokaramaina, dia nokaramaina mba hahatonga ny fiainan'i Angela ho fahoriana. Mody atao hoe Ed ilay mpamono olona mba hanakorontanana ny raharahan'ny vadiny.
Amin'ny fotoana iray, na i Angela na i Theo dia hahomby amin'ny fikatsahany an'i Olivier. Noho izany, ny vanim-potoana ho avy amin'ny fiainan'i Angela dia afaka mahita ny fampidirana ireo mpanohitra na olana vaovao. Raha tafavoaka ny fonja ny vadiny, dia mety hanararaotra hanao zavatra mampidi-doza izy.
Nandritra ny vanim-potoana voalohany, ny vadin'i Joanne dia nampijaly azy tamin'ny fomba ara-batana sy am-bava, ka nahatonga azy ho ratra sy tsy nify. Nanaraka azy tany amin'ny zaridainam-panjakana i Ed dia nanatona azy ary nanolotra azy hanampy azy amin'ny raharaha fisaraham-panambadiana izay hatrehany amin'ny vadiny. Lasa variana tamin'ny fanaporofoana i Angela fa i Olivier dia saro-kenatra tokony hohidiana rehefa tsy hita i Yuki. Vokatry ny fikasana hamono an'i Angela dia maty i Olivier. Nandritra ny fitantarana, dia mahita bebe kokoa momba ny lasa Edgewater sy ny toe-tsain'i Angela isika vokatry ny fampijaliana azy. Nahazo ny fahaleovantenany sy ny fitazonana ny zanany indray i Angela sy Theo, nandresy an'i Olivier tamin'ny lalaony manokana.
Efa misy ve ny teaser amin'ny vanim-potoana faharoa ho avy? Raha toa ka tsy havaozina ny andiany enina, dia mbola tsy navoaka ny tranofiara ho an'ny andiany enina. ITV dia manana ny vanim-potoana voalohany amin'ny andiany mampientam-po azo alaina ho an'izay mbola tsy nijery azy taloha. Ny fampisehoana dia manana naoty fankatoavan'ny mpihaino IMDb amin'ny 7/10, ka tsy handany fotoana ianao.
Hamaky bebe kokoa: Space Force Season 2: Daty famoahana sy ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
First Wives Club Season 3: Zavatra tokony ho fantatrao!
Apex Legends Mobile: Raiso ny scoop momba ny fotoana sy ny fomba hilalao eto!
Fitsarana maimaim-poana amin'ny amazona india
izay iTunes tokony alaiko
mijery amerikana tsara an-tserasera maimaim-poana
hulu tv vs sling vs youtube tv
hulu spotify mpianatra tsy miasa
mijery sarimihetsika vaovao mandeha amin'ny Internet maimaim-poana